Old Mutual Zimbabwe is going to be indefinitely suspended from Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) according to sources. The communication by state media and the Zanu PF party has caused Zimbabweans to believe Old Mutual is being de-listed, have their licenses withdrawn or closed.
Sources who spoke to Savanna News earlier in the day revealed the Zimbabwe Stock exchange has been directed to lift the suspension of other counters except Old Mutual Zimbabwe Limited.
Zanu PF spokesperson Patrick Chinamasa was quoted by ZBC TV saying the party welcomes the ejection of Old Mutual from the financial system.
Tags: Old Mutual Zimbabwe de-listedZimbabwe Stock Exchange (ZSE)